बिमान दुर्घटनामा को को परे ! पढ्नुहोस | Citizen FM 97.5 Mhz
Home > समाचार > बिमान दुर्घटनामा को को परे ! पढ्नुहोस
बिमान दुर्घटनामा को को परे ! पढ्नुहोस
फाल्गुन २८, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा बंगलादेशबाट आएको जहाज दुर्घटना हुदा कम्तिमा ४० जनाको मृत्यु भएको भएको छ । २८ जनाको घटनास्थलमै र बाँकीको अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार विमानमा ३३ जना नेपाली सवार थिए । विमानमा चार चालक दलका सदस्यसहित ६७ यात्रु सवार रहेका बताइएको छ । ढाकाबाट काठमाडौँ आएको बिएस २११ ‘कल साइन’ को विमान अवतरणको क्रममा अनियन्त्रित भई धावनमार्गको पूर्वतर्फ दुर्घटनाग्रस्त भएको हो ।
दुर्घटनास्थलबाट उद्धार गरीएका मध्ये ८ जनाको मृत्यु भएको विमानस्थलले जनाएको छ । उपचार गराइरहेका मध्ये २ जना समान्य उपचारपछि घर फर्किएका छन् । ढाकाबाट आएको युएस बंगला एयरलाइन्सको जहाज अवतरणको क्रममा रनवेबाट बाहिर गएर दुर्घटनामा भएको विमानस्थलका महा प्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
विमानस्थलले दक्षिणबाट अवतरणका लागि अनुमति दिएकोमा चालकले उत्तर तर्फबाट अवतरण गरेको जनाएको छ । यद्धपि यो नै दुर्घटनाको कारण हो या होइन भन्ने पुष्टि भइसकेको छैन ।
जहाज दुर्घटनामा परेर आगलागी भएपछि अग्निनियन्त्रकको ठुलो टोली आगो निभाएको छ । दुर्घटनापछि करिब ३ घन्टा विमानस्थलमा उडान र अवतरण ठप्प भएको थियो । घाइतेको केएमसी अस्पताल सिनामंगल र नर्भिक अस्पताल थापाथलीमा उपचार भइरहेको छ ।
दुर्घटनाअघि पाइलट र कन्ट्रोल रूम बीच के कुराकानी भयो ! पढ्नुहोस्
बंगलादेशका परराष्ट्र मन्त्री नेपाल आउँदै ! पढ्नुहोस किन ?
महिलामाथि छुरा प्रहार गरी फरार दुई अभियुक्त पक्राउ
‘डान्स नेपाल डान्स’ रियालिटी शोको नाममा ठगी गर्ने बिक्रम अछामी पक्राउ
फेसबुकका चर्चित शेरेको खुल्यो रहस्य ! पढ्नुहोस